The 8th Chengdu International Tourism Expo 2020 ပြပွဲ ကျင်းပမည် - Events - - MyanTrade
The 8th Chengdu International Tourism Expo 2020 ပြပွဲ ကျင်းပမည်
Updated At: 2020-08-18 09:09:44
“The 8th Chengdu International Tourism Expo 2020”ပြပွဲ ကိုတရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ စီချွမ်ပြည်နယ်၊ ချန်ဒူးမြို့တွင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့မှ ၂၈ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကတဆင့် ပါဝင်တက်ရောက်ပြသရန် ဖိတ်ကြားလာ ပါသည်။ အဆိုပါပြပွဲသည် ခရီးသွားလုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ် (Tourism Brands) မြှင့်တင်ရေး၊ လုပ်ငန်းရှင်များအချင်းချင်း သီးခြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ခြင်း၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ် (Tourism resources) များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းထုတ်ကုန်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု များ ပိုမိုတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာစေရန် ရည်ရွယ်ကျင်းပခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါပြပွဲသို့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်အဖွဲ့အစည်းများက တာဝန်ရှိသူများ ပါဝင်တက်ရောက်စေလိုပါကြောင်းနှင့် နိုင်ငံတကာမှ ပါဝင်ပြသသူများအနေဖြင့် International Participation Fee (Bare Space: 210 USD/sqm (min. 18 sqm)/Shell Scheme: 320 USD/sqm (min.6sqm) ဖြင့် ပါဝင်ပြသနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ “The 8th Chengdu International Tourism Expo 2020” သို့ ပါဝင်ပြသလိုပါက (Helen Yang, Tel: 86-010-8447 6820, 13810260006, email: [email protected]/[email protected]) သို့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ပြပွဲဆိုင်ရာအချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက မြန်မာကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့၊ ကုန်သွယ်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနခွဲ၊ ရုံးအမှတ် (၃)၊ နေပြည်တော်၊ ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၀၈၆၀၈၊ ၀၆၇-၃၄၀၈၆၂၂၊ ၀၆၇-၃၄၀၈၆၂၃ နှင့် email: [email protected] နှင့် [email protected] gov.mm သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးပါသည်။
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ စီချွမ်ပြည်နယ်၊ ချန်ဒူးမြို့